musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Mumarimi emoto: Moto mukuru unoputika paKabul Airport
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chinyanyo kuzivikanwa nezve kuomarara kwemoto kana mabviro, asi mavhidhiyo akatumirwa pasocial media anoratidza gore rine hutsi hweutsi hunokwira kubva kunhandare yendege, iyo yanga iri nzvimbo yekutandarira kweUS neWestern svondo rapfuura.
Moto wakashumwa paHamid Karzai International Airport.
Gore guru reutsi rinokwira pamusoro peairport.
Mamiriro ekuchengetedza panhandare yendege anoramba asina kusimba.
Moto mukuru wakaita kunge wabuda paKabul's Hamid Karzai International Airport muAfghanistan, pakati pechisimba kuri kubuda nezviuru zvevanhu vane shungu dzekubuda munyika.
Nhau dzemoto dzakaputika neMuvhuro manheru nguva yemuno. Chinyanyo kuzivikanwa nezve kuomarara kwemoto kana mabviro, asi mavhidhiyo akatumirwa pasocial media anoratidza gore rine hutsi hweutsi hunokwira kubva kunhandare yendege, iyo yanga iri nzvimbo yekutandarira kweUS neWestern svondo rapfuura.
Mamiriro ekuchengetedzeka panhandare yendege anoramba asina kusimba, nemauto eU.S. uye vakabatana vachishanda kuti vabudise zviuru zvevanhu zvavo nevapoteri veAfghan kubva kuKabul. Maawa moto usati watanga, mauto eUS nemaGerman vakapinda muhondo yepfuti nevanhu vasingazivikanwe, mukutsinhana moto wakasiya musoja mumwe weAfghan. Vanenge makumi maviri vanhu vakafa panhandare yendege muvhiki rapfuura, akadaro mukuru weNATO.
Hazvina kujeka panguva yekunyora kana moto uri kukanganisa ndege kuenda nekudzoka kunhandare. Ndege dzaive dzichibuda panhandare yendege dzisingamire mukupera kwesvondo, nevatungamiriri veBiden vachiti vakaburitsa vanhu vangangosvika zviuru gumi nezviviri mumaawa makumi matatu nematanhatu. Nekudaro, zviuru zvevamwe zvakasara muKabul, uye mukana weUS nevabatsiri vayo kusangana nemusi waAugust 11,000 nguva yekuregedza zvachose yava mubvunzo.
VaTaliban, avo vakatora masimba muAfghanistan kweinopfuura vhiki rapfuura, vakayambira nezve "mhedzisiro" kana nguva yekupedzisira isina kuzadzikiswa.